Juventus oo xiiseeneysa in xidig muhiim ah ay kala saxiixato kooxda Barcelona – Gool FM
Juventus oo xiiseeneysa in xidig muhiim ah ay kala saxiixato kooxda Barcelona
(Juventus) 19 Okt 2018. Saxaafada dalka Talyaaniga ayaa waxay shaaca ka qaadeen in kooxda Juventus ay sii wadi doonto sameynta saxiixyada ay ka dooneyso suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, waxayna dooneysaa in Bianconeri ay ku xoojiso ciyaartoyda ugu fiican aduunka.
Juventus ayaa si layaab leh ugu guuleesatay suuqii xagaaga ee lasoo dhaafy saxiixa laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo, kadib markii ay kala soo saxiixdeen Real Madrid aduun dhan 100 milyan oo euros.
Wargeyska “Tuttosport” ayaa wuxuu tilmaamay in kooxda Juventus ay sidoo kale bartilmaameed ka dhiganayo saxiixa difaaca garabka bidix ee kooxda Barcelona Jordi Alba.
Kooxda Bianconeri ayaa ku fikireysa in Alex Sandro uu ka dhaqaaqi karo Allianz Stadium, sidaas darteed waxay dooneysaa inay badal kaga dhigato midkood xidigaha Marcelo iyo Jordi Alba.
Jordi Alba ayaa dhacaya heshiiska uu ku joogo kooxda Barcelona sanada 2020, waxaana la fahansan yahay in laacibka reer Spain uu ka careysan yahay in ilaa iyo haatan aysan maamulka kooxda u soo bandhigin wada hadalo uu ku saxiixayo heshiis cusub.
Laakiin kooxda reer Talyaani ee Juventus oo il gaar ah ku heysa xaalada Jordi Alba ee kooxda Barcelona ayaa waxay loolan adag ee ku aadan saxiixiisa kala kulmi doontaa dhigeeda reer England ee Manchester United.
kooxda Chelsea oo sii go’aamisay xidigaha ay dooneyso inay kaga maaranto adeega Alvaro Morata
Roberto Firmino oo u sharaxan inuu noqdo badalka Luis Suarez ee kooxda Barcelona